काक्रो अचारमा यति थोरै कुरा याद गर्ने हो भने अचम्मै मिठो बन्ने रहेछ - भिडियो सहित - ज्ञानविज्ञान
वास्तवमा काक्रोको अचार कसरी बनाउँने भनेर कुनै नेपालीलाई सिकाउँनु भनेको त्यति उपयुक्त कुरा होइन सायद । लगभग जसो हरेक नेपालीलाई काक्रोको अचार बनाउँन आउँछ ।
आलुमा मिसाएर होस् या प्याजमा मिसाएर वा बट्टामा राखेर बनाइने खल्पिको रुपमा होस्, हरेक नेपालीको भान्सामा कुनै न कुनै तरिकामा काक्रोको अचार बनाइएकै हुन्छ वा भनौँ खाइएकै हुन्छ ।
गाउँघर तिर काक्रोको अचार बनाउँने पनि सिजन हुन्छ । भरसक बजारबाट किनिने भन्दा घरैमा फलाइएको काक्रोबाट अचार बनाइनु गाउँको विशेषता हो । अझ पहाडतिर नै पुराना काक्रोको खल्पि खाइने गरिन्छ ।
तर सबै अचारहरु मिठै हुन्छन् भन्ने पनि हुदैन । लगभग सबैले बनाउँने भए पनि वा बनाउँन जानेको भए पनि केवल घरायसी खानको लागि त हो नि भनेर काक्रोको अचार बनाउँदा त्यति ख्याल गरिदैन । यदि काक्रोको अचार बनाउँदा थोरै कुराहरु याद गर्ने हो भने अचम्मै मिठो काक्रोको अचार बन्ने रहेछ ।
Don't Miss it इटालियन पिज्जा बनाउँने हो ? यसरी सिक्नुहोस् – भिडियो सहित
Up Next अन्डाको सेतो भाग खानुहोस्, पहेँलो भन्दा यसका फाइदै फाइदा छन्
कान दुखेमा यसरी घरैमा उपचार गर्न सकिन्छ
कानको दुखाइ कुन बेला सुरु हुन्छ भन्न सकिन्न । विभिन्न रोग तथा संक्रमणले गर्दा कान एक्कासी दुख्न सुरु हुन्छ ।…
7 months ago sam dahal
किन आउछ कोठी ? र यसको समाधान के हो ?
मानिसको छालामा आउने काला वा अन्य रंगका दानालाई कोठी भनिन्छ |हामीले बुझ्ने कोठी भनेको छालालाई रङ्ग प्रदान गर्ने कोषिका एकै…